Masar: QM oo ka digtay xayiraadaha NGOs - BBC News Somali
Masar: QM oo ka digtay xayiraadaha NGOs
Image caption Hossam Bahgat oo ah wariye ayaa ka mid ah dad xaquuqda u dooda ee la dacwaynayo.
Qaramada Midoobay ayaa ka muujisay walaac xiritaanka boqolaal urur oo aan dawli ahayn ee dalka Masar iyo dacwooyin lagu qaadayo dadka u dooda xaquuqda bini'aadanka.
Gudoomiyaha sare ee xaquuqda bini'aadanka Zeid Raad Al Hussein, ayaa ka digay xiritaanka ururada inay hadalka ku xirayso daddka u dooda dhibanayaasha.
Maanta ayaa maxkamad ay go'aan ka gaari doonta, lacagta laga xayiray Gamal Eid iyo Hossam Bahgat.
Waxaa lagu eedeeyay inay inay si sharci daro ah lacag uga heleen dowlado ajnabi.
Dacwada Mr Eid, oo ah sharci yaqaan madax u ah Arab Network for Human Rights Information, iyo Mr Bahgat oo ah wariye ahaan jiray madaxa Egyptian Initiative for Personal Rights, ayaa ka mid ah baaritaano shan sano lagu samaynayay ururada aan dawliga ahayn ee dalka iyo kuwa caalamiga (NGO).
Markuu xukunka qabsdaay Cabdul Fatax al Sisi, masuuliyiinta waxay xooga saareen ururada aan dawliga ahayn ee dalka.
Xafiiska Gudoomiyaha xaquuqda bini'aadanka ee (OHCHR), ayaa sheegay in ururada aan dowliga ahayn la kala diray iyadoo loo isticamaalayo sharciga 2002 ee ururada. (Law on Associations, 2002).
Sharcigan ayaa u ogolaanaya dowladda in ay xirto koox walba oo aan sharciga ku dhaqmi, inay xayirto lacagahooda, qaadato dhismayaashooda iyo in xayiraado lagu sameeyo inay lacag helaan ama ay la shaqeeyaan hayadaha caalamiga.
Wareegii hore ayaa dhamaaday, markii maxkamad ay ku xukuntay 43 shaqaale ajnabi iyo masaari ah oo u shaqeeya shan urur oo aan dawli ahayn oo caalami ah hal ilaa shan sano oo xarig ah, inakstoo xukunka lagu qaaday dad maqan qaarna dib loo dhigay.